About Us | Shwe Web Hosting | Myanmar
Shwe Hosting (NetScriper Ltd.) သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ နှင့် အင်္ဂလန် နိုင်ငံ London မြို့ရှိ မြန်မာပိုင် web hosting company ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သာမက ကမ္ဘ္ဘ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ရွှေမြန်မာအားလုံးအတွက် စိတ်ချယုံကြည်ရသော Web Hosting package များ၊ Domain Name (TLDs, gTLDs & ccTLDs) များ၊ Reseller Hosting package များ၊ Virtual Private Server (VPS) နှင့် Dedicated Sever အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများအား သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သောဈေးနှုန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
Shwe Hosting ၏ hosting package များသည် မြန်မာ Web Developer များအသုံးများသည့် module များ၊ setting များ ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
Hosting ဝယ်ယူသူတိုင်း ကိုယ်ပိုင် Hosting control panel (cPanel) ရရှိမှာပါ။
Domain ဝယ်ယူသူတိုင်း ကိုယ်ပိုင် Domain control panel ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Shwe Hosting မှာ တစ်ခြား Hosting များကဲ့သို့ Hidden fee များ၊ Account Setup fee များ၊ Hosting Renew လုပ်ရာတွင် Administration fee များ လုံးဝမရှိပါ။
Customer များ၏ ယုံကြည်မှု၊ Shwe ၏ ဝန်ထမ်းများမှ ရိုးသားကြိုးစားမှုဖြင့် 2006 မှစတင်ပြီး hosting များရောင်းချလာရာ ယခုအချိန်တွင် hosting (Wholesales) ပင်မဒိုင် ဟုပင်ဆိုနိုင်ပါပြီ။
Shwe Hosting ၏ ဝန်ထမ်းများမှာ မြန်မာများ ဖြစ်သောကြောင့် Technical Support ပေးရာတွင် မြန်မာ ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သောကြောင့် နိုင်ငံခြား company များမှ ဝယ်ယူသည်ထက် မေးခွန်းများ မေးမြန်းရာတွင် (သို့) ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြေရှင်းရာတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Shwe Hosting သည် မြန်မာပိုင် Web Hosting များထဲတွင် အကောင်းဆုံး တစ်ခုဟု ဆိုရလောက်အောင် Shwe Hosting မှ ၂၄နာရီ ၇ ရက်ပတ်လုံး Sever များ စောင့်ကြပ်မှု ပေးခြင်း၊ အခမဲ့ Technical Support ပေခြင်း၊ Weekly Backup များနှင့် 99% Sever Uptime အာမခံမှုများအပြင် မိမိတို့၏ Sever များကို CPU ၈လုံး ပါဝင်သော Intel Xeon အဆင့်မြင့် super processor များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
We are Wholesale (ပင်မဒိုင်)
Shwe Hosting မှ တစ်ဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချသော (Reseller package) များ ရောင်းချလာစဉ်မှ စ ပြီး Yangon နှင့် Mandalay ရှိ IT company များ၊ Web Design company များ၊ Freelance Web Designer/Developer များက Shwe ၏ Reseller package များဖြင့် သူတို့၏ customer များကို ကိုယ်ပိုင် နာမည် (own Brand) များဖြင့် (resell) တစ်ဆင့် ပြန်လည် ရောင်းချလာပါသည်။
ထို.ကြောင့် Shwe Hosting တွင် ပုံမှန် Direct customer များအပြင် Reseller များ အများအပြားရှိလာသောကြောင့် Shwe Hosting ၏ sever များရှိ ထောင်ပေါင်း များစွာသော website များကို နေ့စဉ် (daily hit) ထိတွေ့အသုံးပြုနေ သော User များမှာ သိန်းနှင့်ချီပြီး ရှိနေပါသည်။
သင်နေ့စဉ်ကြည့်ရှုနေသော မြန်မာ website များ၏ ၁၀ ခုတွင် ၄ ခု (သို့) ၅ ခု မှာ Shwe Hosting တွင် host လုပ်ထားသော Direct (သို့) Reseller customer များ၏ website များ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါသည်။
သင်လည်း Shwe ၏ Reseller hosting package ဖြင့်ကိုယ်ပိုင် Web Hosting စီးပွားရေးတစ်ခု ဒီနေ့ချက်ချင်း စတင်နိုင်ပါပြီ။ Reseller hosting အား အသေးစိတ်လေ့လာရန်
ဘာကြောင့် Shwe မှ Domain နှင့် Hosting များကို တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်သင့်သည်ကို ဆက်ဖတ်ရန်
Shwe Hosting သည် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် Registered limited company ဖြစ်သော NetScriper Co., Ltd. (www.netscriper.com) ၏ လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Netscriper Ltd မှာ အင်္ဂလန် နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက် နေထိုင်သော မြန်မာ IT professional ဖြင့်ဖွဲ.စည်းထားပြီး Netscriper မှ Europe, USA, UAE နှင့် Asia နိုင်ငံများသို. Web Design, Mobile Web, Web Hosting အစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါသည်။
NetScriper အနေဖြင့် 2006 ခုနှစ်မှစတင်၍ hosting များစတင်ရောင်းချလာရာ 2008 ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာရှိ မြန်မာများအတွက် Shwe Hosting ဆိုသောနာမည်ဖြင့် စတင်ရောင်းချလာပါသည်။
ယခုအခါတွင် International team အဖြစ်ပြောင်းလဲလာသော NetScriper သည် ရွှေမြန်မာ များ အတွက် Shwe Web Hosting ၊ မြန်မာ ကြော်ငြာကွန်ရက် AdInnwa ၊ UK ဈေးအသက်သာဆုံး 95p Web Hosting ၊ US ဈေးအသက်သာဆုံး 95c Web Hosting ၊ နိုင်ငံတကာရှိ Hosting Reseller လုပ်လိုသူများ အတွက် Mr Hosting Reseller အစရှိသော လုပ်ငန်းခွဲများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Shwe Hosting is the United Kingdom and Myanmar based Myanmar (Burmese) web hosting provider for Myanmar people around the world.
Unlike other web hosting providers, there are NO hidden fee at Shwe Hosting and we normally provide our best service to customers atareasonable price. We provide Myanmar (Burmese) / English Speaking technical support to all of our existing customers as well as new customers for free, plus 24x7 server monitoring, daily/weekly backup and reliable services.